श्रीमान भारतमा बेपत्ता, ७ जनाको परिवारमा क'माउने कोही न'हुँदा भोकै (भिडियो हेर्नुहोस्) -
Homeसमाचारश्रीमान भारतमा बेपत्ता, ७ जनाको परिवारमा क’माउने कोही न’हुँदा भोकै (भिडियो हेर्नुहोस्)
October 30, 2020 admin समाचार 4758
लकडाउनकै समय’मा क’माउन भन्दै भारत गएका बाँके कोहलपुरका एक नेपाली’को भारतमै नि’धन भएको छ । पैसा कमा’उनका भौतारिएका एक जना भारतकै एक जनाको स’म्पर्कमा गएका थिए ।
तर उनको निध’नको खबर आयो । तर जसको साथ लागेर उनी भारत गएका थिए उनी पनि स’म्पर्कमा आएका छैनन् । उनको श’व फेला परेको भन्दै परिवा’रका सदस्यले खबर पाएका छन् । घरमा श्रीमति, आमा र साना छो’राछोरी छन् । कमाउने मानि’सकै यस्तो अवस्था भएपछि अहिले घरमा सबैको बि’चल्ली भएको छ ।
जसले काम गर्न भन्दै ति पुरु’षलाई लगेका थिए उनी पनि सम्पर्कमा छैनन् । परिवारका स’दस्य सबै भारतमै थिए । भारतमा भएका एक जना ठेके’दारले माछा मा र्न भन्दै लिएर गएका थिए । काम गर्न भन्दै मेट मा’र्फत भारतको रानी खे’तमा परिवार सहित लिएर गएका उनलाई माछा मा’र्न भन्दै लिएर गएका हुन् । आज काम’मा जान सक्दैन म कोठामै बस्छु भनेर बसेका थिए । तर मितिनीको श्रीमा’नले घरमै आएर लिएर गएको उनको श्रीम’तिले बताएकी छन् ।
जान्न भन्दा भन्दै को’ठाबाट लिएर गए, श्रीमतिले भनिन्, तर त्यो दिन राती सम्म’पनि फर्केर नआएपछि उनले खोजी थालिन् । देवर’लाई पनि फोन गरेर सबै कुरा बताइन् । सबै खोजी गर्दा पनि फेला नपरेपछि ११ गते पनि श्रीमान आ’एनन् । श्रीमति पनि काम’मा निस्किइन् । कामवाट फर्केर कोठामा आउँदा पनि श्रीमान नआ’एको थाहा पाएपछि उनले फेरी खोजि गरिन् । तर जसले लिएर गएको उनी’हरुले हामी उनलाई खोलामै छोडेर हामी घर फर्केको बताएपछि घटना थप शं’कास्पद लाग्यो ।
कैलालीका दुई ज’नासंग गएका उनी बेप’त्ता भएका थिए । तर धेरै दिन पछि उनको श’व फेला परेको थियो । उनीहरुको अहिले आ’र्थिक अवस्था निकै ना’जुक भएका कारण जसले यस्तो अवस्था बनाएको हो उनीहरुलाई कानुनी का’रवाही गर्न र आर्थिक सहयोगको आ’शा गरेका छन् । -इताजा खबर बाट
January 8, 2021 admin समाचार 2713
May 1, 2021 admin समाचार 368
कोभिड १९ संकट व्यव’स्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले जारी निषेधाज्ञामा पत्रका’रलाई थप कडाइ गरेको छ। शुक्रबार बसेको सिसिएमसी बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सूचना तथा प्रसारण वि’भागबाट र अन्य जिल्ला’का हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको प्रेस पास
April 13, 2021 admin समाचार 1022
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (171289)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (165268)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (164713)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (164697)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (163746)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (162228)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (161826)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (160279)